Welcome to Dhammadownload This is the Dhamma Download Home Page. In this Web Site , you can freely download or listen on-line most of the Dhamma Talks which were given by Myanmar monks over the years. This website is created byagroup of Myanmar in Singapore, dedicated to all Buddhist all over the world. ~~~~~~~~~~~~~~~
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ် နာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ မှ ဓမ္မာစရိယ စာချတန်းအတွက် သင်ကြားပို့ချသော စာဝါ များ ~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် ပညာရေးစနစ်ကို အခြေခံသော ဘာသာတရားဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ စကားတော်များကို နားလည်၍ လက်တွေ့ဘဝတွင် ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ဗုဒ္ဒဘာသာ ပညာရပ်များကို လေ့လာရေးသည် ဘာသာဝင်တိုင်း၏ တာဝန် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဒဘာသာ ပညာရပ်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ဘာသာတရားကို စောင့်ရှောက်ကြပါစို့...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များကို လွယ်လင့်တကူ နာယူမှတ်သားနိုင်ရန်အတွက် dhammadownload.com ကို 2002 ခုနှစ်မှ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆရာတော်ကြီးများ ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များကို OnLine Media Library အဖြစ် တင်ပြလာခဲ့သည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် MP3 တရားတော် အပုဒ်ရေ ပေါင်း တစ်သောင်း၇ထောင်ကျော်၊ WMV ဗီဒီယို တရားတော်ပေါင်း ၄ထောင်ကျော်၊ eBooks စာအုပ်ပေါင်း တထောင်ကျော်တို့ကို စုစုပေါင်း ၁၂၅၀ ဂစ်ဂါဘိုက် ခန့်တင်ပြထားရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် ဒီဘဝနှင့်ပင် ခန္ဓာဥာဏ်ရောက် သစ္စာဆိုက်အောင် သူတော်ကောင်းတရားများ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ဖို့ရန် အခွင့်ထူးကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်နှင့် အညီ လိုက်၍ သူတော်စင်တို့၏ သွားရင်း လာရင်း ရရှိသည့် အားလပ်သည့် မိနစ်ပိုင်းလေးတွေမှာပင် တရားတော်များနှင့် ထိတွေ့နိုင်ရန် iPhone/iPAD နှင့် တချို့သော Mobile Device များပါ မကျန် dhammadownload.com ပေါ်ရှိ တရားများကို နာယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ ဤကဲ့သို့သော အခွင့်ထူးကြီးကို လက်လွတ်မခံကြပဲ မိမိတို့ အခါအခွင့်သင့်သလို တရားတော်များကို
http://www.dhammadownload.com တွင် နာယူကြပါရန်နှင့် နီးစပ်ရာ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်း ဤ website အကြောင်း သတင်းကောင်း ပါး ပေးကြပါရန် လေးနက်စွာ တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်�
Our Website Hosted since 26 August 2002. dhammadownload.com တွင် သူတော်စင် ဦးရေ (နေ့စဉ်) ၂၅၀၀ခန့်၊ ဝင်ရောက်လည်ပါတ်သည့်အကြိမ်ပေါင်း (နေ့စဉ်) ၃၅၀၀ခန့်၊ တရားတော် ဒေါင်းလုပ်သည့်ပမာဏ (နေ့စဉ်) ၄၂၀ ဂစ်ဂါဘိုက် ခန့်၊ (လစဉ်)ဒေါင်းလုပ်သည့်ပမာဏ ၁၁တယ်ရာဘိုက်ခန့် ရှိကြောင်း အားရ ကြေနပ်ဖွယ် တွေ့ရှိရပါသည်။ သူတော်စင်များ ယခုလို အားသွန်ခွန်စိုက် တရားတော်များကို နာယူ မှတ်သား လေ့ကျင့် နေကြခြင်းကို ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစုမှ အလွန်ပင် ဝမ်းမြောက် မိပြီး သူတော်စင်တို့၏ ဖြူစင် အေးချမ်းသော ကောင်းမှု ကုသိုလ်များအတွက် သာဓု ခေါ်ဆို မိပါသည်။ ထိုနည်းအတူ၊ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့ သည် ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များကို ဤ website တွင် ပူဇော်တင်ပြရသော ကုသိုလ်အဖို့ဘာဂကို တရားနာကြရကုန်သော လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့နှင့် တကွ ၃၁-ဘုံသားတို့ အား အမျှပေးဝေ လိုပါသည်။ အားလုံး အမျှရကြ၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာ ချမ်းသာပြီး
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များ ရင်ဝယ်ပိုက်၍ ထာဝရ ငြိမ်းအေးကြပါစေ....
သူတော်ကောင်း၊ သူမြတ်လောင်းတို့ ပေးပို့သော ကုသိုလ် အဖို့ဘာဂ နှင့် အမျှကိုလည်း ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့ က ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ သာဓု အနုမောဓနာ ခေါ်ဆိုပါကုန်၏.... အားလုံး.....အမျှ....အမျှ....အမျှ....ယူတော်မူကြပါကုန်လော့............. သာဓု....သာဓု.....သာဓု....... ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု......ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု.......ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု.......
ဓမ္မဒေါင်းလုပ် website ကို InternetTraffic နိုင်အောင် 1Gbps Internet Bandwidth, Dedicated Server with SSD Hardisk array များဖြင့်, စီစဉ်ထားပါသည်။ ယ္ခု ဓမ္မဒေါင်းလုပ် website မှ တရားတော်များ၏ URL Link များကို မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် website မှ တိုက်ရိုက် ပြန်လည် Link လုပ်၍ အသုံးပြုလိုပါက ခွင့်ပြူပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Special Prayers ******************************************************
သဘာဝရဲ့ ဘေးအန္တရယ်နှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲတို့ကို ခံစားနေရသော လူ၊ နတ်၊ သတ္တဝါတွေ၊ ဘေးဒုက္ခအန္တရယ်များကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ...
၁။ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ၊ နေ၀ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ။ ယဥှိ စေ၀ါနုယုဉ္ဇန္တော၊ ရတ္တိန္ဒိဝ မတန္ဒိတော။ ၂။ သုခံ သုပတိ သုတ္တော စ၊ ပါပံ ကိဉ္စိ န ပဿတိ။ ဧ၀မာဒိ ဂုဏူပေတံ။ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
၃။ကရဏီယာ မတ္ထကုသလေန၊ ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမေစ္စ။ သက္ကော ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုဝစော စဿ မုဒု အနတိမာနီ။ ၄။ သန္တုဿကော စ သုဘရော စ၊ အပ္ပကိစ္စော စ သလ္လဟုက၀ုတ္တိ။ သန္တိန္ဒြိယော စ နိပကော စ၊ အပ္ပဂဗ္ဘော ကုလေသွ န နုဂိဒ္ဓေါ။ ၅။န စ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဉ္စိ၊ ယေန ၀ိညူ ပရေ ဥပ ၀ဒေယျုံ။ သုခိနောဝ ခေမိနော ဟောန္တု၊ သဗ္ဗတတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ။ ၆။ ယေ ကေစိ ပါဏဘူတတ္ထိ၊ တသာ ၀ါ ထာဝရာဝ န၀သေသာ။ ဒီဃာ ၀ါ ယေ၀ မဟန္တာ၊ မဇ္ဈိမာ ရဿကာ အဏုကထူလာ။ ၇။ဒိဋ္ဌာ ၀ါ ယေ၀ အဒိဋ္ဌာ၊ ယေ၀ ဒူရေ ၀သန္တိ အ၀ိဒူရေ။ ဘူတာဝ သမ္ဘဝေသီဝ၊ သဗ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ။ ၈။ န ပရော ပရံ နိကုဗ္ဗေထ၊ နာတိမညေထ ကတ္ထစိ န ကဉ္စိ။ ဗျာရောသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညဿ ဒုတ္ခ မိစ္ဆေယျ။ ၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတ္တ၊ မာယုသာ ဧကပုတ္တ မနုရက္ခ။ ဧ၀မ္ပိ သဗ္ဗဘူတေသု၊ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ ၁၀။မေတ္တဉ္စ သဗ္ဗလောကသ္မိ၊ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ ဥဒ္ဓံ အဓော စ တိရိယဉ္စ၊ အသမ္ဗာဓံ အဝေရ မသပတ္တံ။ ၁၁။ တိဋ္ဌံ စရံ နိသိန္နော ၀၊ သယာနောယာဝတာဿ ၀ိတမိဒ္ဓေါ။ ဧတံ သတိံ အဓိဋ္ဌေယျ၊ ဗြဟ္မ မေတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာတု။ ၁၂။ ဒိဋ္ဌိဉ္စ အနုပဂ္ဂမ္မ၊ သီလ၀ါ ဒဿနေန သမ္ပန္နော။ ကာမေသု ၀ိနယ ဂေဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂ္ဂဗ္ဘသေယျ ပုန ရေတိ။ မေတ္တသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။
ဗုဒ္ဓဂယာ သို့ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့အထိ ၁၁ရက်တာ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း
ပထမနေ့ ၂၂-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁) ၁-၁
ရန်ကုန်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာသို့ သွားရောက်ခြင်း
ပထမနေ့ ၂၂-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၂) ၁-၂
က) အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗီဟာပြည်နယ် ဗုဒ္ဓဂယာတွင် တည်ရှိသော မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ ဘူမိဖဿဆင်တုတော်အား ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း
ခ) မဟာဗောဓိစေတီတော်သမိုင်း ရှင်းတမ်း
ဂ) မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ သတ္တဌာန ၇ ဌာန မှ ပထမသတ္တာဟခေါ် ပလ္လင်္ကသတ္တာဟ ရှင်းတမ်း
ဃ) မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ သတ္တဌာန ၇ ဌာန မှ ဒုတိယသတ္တာဟခေါ် အနိမိသစေတီတော် ရှင်းတမ်း
င) မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ သတ္တဌာန ၇ ဌာန မှ တတိယသတ္တာဟခေါ် ရတနာစင်္ကမသတ္တာဟ ရှင်းတမ်း
စ) မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ သတ္တဌာန ၇ ဌာန မှ စတုတ္ထသတ္တာဟခေါ် ရတနာဃရရွှေအိမ်တော် ရှင်းတမ်း
ဆ) မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ သတ္တဌာန ၇ ဌာန မှ ပဉ္စမသတ္တာဟခေါ် အဇပါလ ဆိတ်ကျောင်းညောင်ပင်နေရာ ရှင်းတမ်း
ဇ) မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ သတ္တဌာန ၇ ဌာန မှ ဆဋ္ဌမသတ္တာဟခေါ် ကျည်းပင်ပေါက်ရာ မုစလိနာရေအိုင် နေရာ ရှင်းတမ်း
ဈ) မဟာဗောဓီစေတီတော်ကြီး အတွင်းရှိ သတ္တဌာန ၇ ဌာန မှ သတ္တမသတ္တာဟခေါ် လင်းလွန်းပင်ပေါက်ရာ ရာဇာရတနသတ္တာဟ ရှင်းတမ်း
ဒုတိယနေ့ ၂၃-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၃) ၂-၁
က) ဗုဒ္ဓဂယာမှ ၁၂ ကီလိုမီတာခန့် ဝေးသော မြတ်စွာဘုရား ၆ နှစ်တာ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်သုံးခဲ့ရာ ဥရုဝေလ တောင်သို့ သွားရောက်ခြင်း
ခ) ဥရုဝေလတောင်ခြေ ကားဂိတ်
ဂ) ဥရုဝေလတောင်ထိပ်ရှိ မြတ်စွာဘုရား ၆ နှစ်တာ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်သုံးခဲ့ရာ ဂူ အတွင်းပိုင်း
ဒုတိယနေ့ ၂၃-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၄) ၂-၂
က) ဥရုဝေလတောင်ထိပ်တွင် ဟောကြားသော မေတ္တာသုတ္တံ တရားတော်
ဒုတိယနေ့ ၂၃-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၅) ၂-၃
က) ဥရုဝေလတောင်မှ သုဇာတာသူဋ္ဌေးသမီး ဃနာနို့ဆွမ်းကပ်သည့်နေရာသို့ သွားရောက်ခြင်း
ဒုတိယနေ့ ၂၃-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၆) ၂-၄
က) သုဇာတာသူဋ္ဌေးသမီး၏ အိမ်နေရာ ရှင်းတမ်း
ဒုတိယနေ့ ၂၃-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၇) ၂-၅
ခ) သောတ္ထိယမှ မြက်ရှစ်ဆုပ်ကို လှူဒါန်းသောနေရာ ရှင်းတမ်း
ဂ) သုဇာတာသူဋ္ဌေးသမီး ဃနာနို့ဆွမ်းကပ်သည့်နေရာသို့ သွားရောက်ခြင်း
ဃ) ဟိန္ဒူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ မဟန့်နန်းတော်ဝန်းတွင်းသို့ ကျရောက်သွားခဲ့သော မင်းတုန်းမင်းကြီး၏ မော်ကွန်းကျောက်စာနှင့် မင်းတုန်းမင်း တည်ထားသော ဇရပ်သို့ သွားရောက်ခြင်း
င) မဟန့်နန်းတော်ဝန်းတွင်း နောက်ဘက် တံခါးပေါက်မှ နေရဉ္ဇရာမြစ်သို့ သွားရောက်ခြင်း
စ) ကေမာကူရ ဂျပန်ဘုရားကြီးသို့ သွားရောက်ခြင်း
ဆ) ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာအောင်မြေကျောင်းတော်ကြီးအတွက် စုပေါင်း အလှူဒါန
တတိယနေ့ ၂၄-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၈) ၃-၁
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာအောင်မြေကျောင်းတော်ကြီးမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ ဗာရာဏသီမြို့ အနီးရှိ မိဂဒါဝုန်တွင် တည်ရှိသော မိဂဒါဝုန်မြန်မာကျောင်းတိုက်သို့ ခရီးဆက်ခြင်း
တတိယနေ့ ၂၄-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၉) ၃-၂
က) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ ဗာရာဏသီမြို့ အနီးရှိ မိဂဒါဝုန်တွင် တည်ရှိသော မိဂဒါဝုန်မြန်မာကျောင်းတိုက်မှ ပဉ္စဝဂ္ဂီ ၅ ဦးတို့မှ မြတ်စွာဘုရားအား ခရီးဦးကြိုရာ ချောက်ခဏ္ဍီစေတီသို့ သွားရောက်ခြင်းနှင့် စေတီသမိုင်း ရှင်းတမ်း
တတိယနေ့ ၂၄-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၀) ၃-၃
က) မိဂဒါဝုန်မြန်မာကျောင်းတိုက်မှ မြတ်စွာဘုရားက ပဉ္စဝဂ္ဂီ ၅ ဦးတို့အား ဓမ္မစကြာ တရားဦးဟောရာ ဓမ္မရာဇိကစေတီရှိရာ အုတ်ခုံသို့ သွားရောက်ခြင်းနှင့် စေတီသမိုင်း ရှင်းတမ်း
ခ) မိဂဒါဝုန်ရှိ မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးခဲ့သော နန္ဒိယကျောင်းတော်ရာ ရှင်းတမ်း
ဂ) မိဂဒါဝုန်ရှိ အဖျက်အဆီး ခံထားရသည့် အာသောကကျောက်တိုင်
စတုတ္ထနေ့ ၂၅-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၁) ၄-၁
က) မိဂဒါဝုန်မြန်မာကျောင်းတိုက်မှ မိဂဒါဝုန် ဝန်းထဲရှိ နေရာများသို့ လှည့်လည်လေ့လာခြင်း
မြတ်စွာဘုရားက ပဉ္စဝဂ္ဂီ ၅ ဦးတို့အား အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဟောရာ ဓမ္မေခစေတီသို့ သွားရောက်ခြင်း
စတုတ္ထနေ့ ၂၅-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၂) ၄-၂
က) မြတ်စွာဘုရားက ပဉ္စဝဂ္ဂီ ၅ ဦးတို့အား အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဟောရာ ဓမ္မေခစေတီသို့ သွားရောက်ခြင်းနှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ် တရားတော်
စတုတ္ထနေ့ ၂၅-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၃) ၄-၃
က) မိဂဒါဝုန် ဝန်း အနီး သီဟိုဠ်နိုင်ငံသား အနာဂါရိကဓမ္မပါလ တည်ဆောက်ခဲ့သော မူလဂန္ဓကုဋီ ဝိဟာရသို့ သွားရောက်ခြင်း
ခ) မိဂဒါဝုန်မြန်မာကျောင်းတိုက်မှ ပဓာန နာယကဆရာတော် ဦးဝဏ္ဏဓဇ (အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမဇောတိကဓဇ) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ဂ) မိဂဒါဝုန် အနီး ဗာရာဏသီနန်းတော်နှင့် ဂင်္ဂါမြစ်ဆိပ်သို့ သွားရောက် လေ့လာခြင်း
ဃ) မိဂဒါဝုန်မြန်မာကျောင်းတိုက်အတွက် စုပေါင်း အလှူဒါန
ပဉ္စမနေ့ ၂၆-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၄) ၅-၁
က) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ မိဂဒါဝုန်မြန်မာကျောင်းတိုက်မှ သာဝတ္ထိသို့ သွားရောက်ခြင်း
ခ) သာဝတ္ထိ၊ မဟာဇေယျသုခကျောင်းသို့ရောက်ရှိပြီး ညစာ စာသုံးခြင်း
ဆဋ္ဌမနေ့ ၂၇-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၅) ၆-၁
က) သာဝတ္ထိ၊ မဟာဇေယျသုခကျောင်းမှ မြတ်စွာဘုရား ၂၅ဝါ သီတင်းသုံးရာ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်ခြင်း
ခ) သာဝတ္ထိတွင် မြတ်စွာဘုရားကို ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးအား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သော အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးကြီး၏ အိမ်နေရာ အထိမ်းအမှတ်စေတီ
ဂ) အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးကြီး၏ အိမ်နေရာ အထိမ်းအမှတ်စေတီ အနီးရှိ အဂုင်္လိမာလ ဓါတ်တော်တိုက်
ဃ) ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်ခြင်း
ဆဋ္ဌမနေ့ ၂၇-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၆) ၆-၂
က) သာဝတ္ထိရှိ မြတ်စွာဘုရား ၂၅ဝါ သီတင်းသုံးရာ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၏ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်ရာရှိ မြတ်စွာဘုရား ကျိန်းစက်ရာ ညောင်စောင်းနေရာ
ခ) ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၏ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်ရာရှေ့နားတွင်ရှိသော မြတ်စွာဘုရား သံဃာတော်များအာ တရားဟောရာ ဥပဋ္ဌာနသာလာ ဓမ္မာရုံနေရာ
ဂ) ဇေတဝန်ကျောင်းတော် အဝင်အဝရှိ အာနန္ဒာဗောဓိ ပင်
ဃ) မြတ်စွာဘုရား တန်ခိုးပြာဋိဟာ ပြတော်မူခဲ့ရာ သရက်ဖြူကုန်း
င) မဟာဇေယျသုခကျောင်း၌ နေ့လည်စာ
စ) မဟာဇေယျသုခကျောင်းအတွက် စုပေါင်းအလှူဒါန
ဆ) သာဝတ္ထိ မှ ကုသိနာရုံသို့ ခရီးဆက်ရာ ညပိုင်းတွင် ရောက်ရှိ
သတ္တမနေ့ ၂၈-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၇) ၇-၁
က) ကုသိနာရုံ ရှိ် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံသော နေရာ ပရိနိဗ္ဗာနစေတီတော်၏ ရှေ့အနီးတွင် တည်ထားသော လျှောင်းတော်မူ မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်အား သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း
သတ္တမနေ့ ၂၈-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၈) ၇-၂
က) ကုသိနာရုံ ရှိ် ပရိနိဗ္ဗာနစေတီတော်နားတွင် ဟောကြားတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ခန်း တရားတော်
သတ္တမနေ့ ၂၈-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၁၉) ၇-၃
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး ရုပ်ကလ္လပ်တော်အား သယ်ယူသွားသော တေဇောဓာတ်လောင်ကြွမ်းသောနေရာ (ယ္ခု အင်္ဂါရစေတီ) သို့ သွားရောက်ခြင်းနှင့် စေတီတော်ဝင်းအတွင်း လှည့်လည်ပူဇော်ခြင်း
သတ္တမနေ့ ၂၈-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၀) ၇-၄
က) အင်္ဂါရစေတီ၌ ဟောကြားသော မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ခန်း ဒုတိယပိုင်း တရားတော် ခ) မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် မစံမှီ ရေကြည်တော် သုံးဆောင် တော်မူသော နေရာစေတီ သို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ခြင်း
ဂ) ကုသိနာရုံ မြန်မာကျောင်းတော်ကြီးအတွက် စုပေါင်း အလှူဒါန
ဃ) ကုသိနာရုံ မြန်မာကျောင်းတော်ကြီးမှ နီပေါနိုင်ငံလုမ္မီနီဥယျဉ်သို့ ခရီးဆက်ခြင်း
င) နီပေါနိုင်ငံ၊ လုမ္မီနီဥယျဉ်ရှိ မြန်မာရွှေကျောင်းတော်ကြီးသို့ ရောက်ရှိငာ ညစာ သုံးဆောင်ကြခြင်း
အဋ္ဌမနေ့ ၂၉-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၁) ၈-၁
က) နီပေါနိုင်ငံ၊ လုမ္မီနီဥယျဉ်ရှိ မြန်မာရွှေကျောင်းတော်ကြီးအတွက် စုပေါင်း အလှူဒါန
ခ) လုမ္မီနီဥယျဉ်သို့ သွားရောက်ခြင်း
ဂ) ဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ဖွားမြင်ရာ နေရာဒေသ
အဋ္ဌမနေ့ ၂၉-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၂) ၈-၂
က) လုမ္မီနီဥယျဉ်၌ ဟောကြားသော လုမ္မီနီသမိုင်းကြောင်း တရားတော်
ခ) နီပေါနိုင်ငံ၊ လုမ္မီနီဥယျဉ်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ခရီးဆက်ခြင်း
ဂ) နီပေါနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယ်ဆက်ရှိ် ဆိုလီနောမြန်မာကျောင်း၌ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ကြခြင်း
ဃ) ဆိုလီနောမြန်မာကျောင်းမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဝေသာလီသို့ ခရီးဆက်ခြင်း
င) ဝေသာလီသို့ ရောက်ရှိ
နဝမနေ့ ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၃) ၉-၁
က) ဝေသာလီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ မနက်စာ သုံးဆောင်
ခ) ဝေသာလီရှိ မြတ်စွာဘုရား၏ ဓါတ်တော်များ ကိန်းဝပ်ရာ ဓါတ်တော်တိုက် နေရာဟောင်းသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ခြင်း
ဂ) ဝေသာလီရှိ ဒုတိယ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ရာ အထိန်းအမှတ် အာသောကကျောက်တိုင်သို့ သွားရောက်ခြင်း
နဝမနေ့ ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၄) ၉-၂
က) ဝေသာလီရှိ ဒုတိယ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ရာ အထိန်းအမှတ် အာသောကကျောက်တိုင်၌ ဟောကြားတော်မူသော
ရတနသုတ္တံ နိဒါန်း ရှင်းတမ်း တရားတော်
နဝမနေ့ ၃၀-၁၁-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၅) ၉-၃
က) ဝေသာလီ ကုဋာဂါရ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် စုပေါင်း အလှူဒါန
ခ) ဝေသာလီမှ နာလန္ဒာသို့ ခရီးဆက်ခြင်း
ဂ) နာလန္ဒာတရုတ်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ရောက်ရှိပြီး ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းအတွက် စုပေါင်း အလှူဒါန
ဒဿမနေ့ ၁-၁၂-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၆) ၁၀-၁
က) နာလန္ဒာတရုတ်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက် ဖူးမျှော်ခြင်း
ဒဿမနေ့ ၁-၁၂-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၇) ၁၀-၂
က) ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်ရှိ မြတ်စွာဘုရား သြဝါဒပါတိမောက်ပြဆိုရာ နေရာ၌ ဟောကြားသောတရားတော်
ခ) ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်ရှိ မြတ်စွာဘုရားသီတင်းသုံးရာ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်ရာရှိ နေရာသည် ယ္ခုအခါ သင်္ချိုင်းကုန်းဖြစ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရပုံ
ဒဿမနေ့ ၁-၁၂-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၈) ၁၀-၃
ပိပ္ပလိ လိုဏ်ဂူရှိရာ တောင်သို့ တက်ရောက်ကြခြင်းနှင့် ပိပ္ပလိ လိုဏ်ဂူသမိုင်း ရှင်းတမ်း
ဒဿမနေ့ ၁-၁၂-၂၀၁၅ အမှတ်(၂၉) ၁၀-၄
က) ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံမှ တည်ထားသော ၀ိသျှ န္တိစေတီ (ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီ) သို့ ထိုင်ခုံစက်လှေခါးများဖြင့်တက်ရောက်ကြခြင်း
ဒဿမနေ့ ၁-၁၂-၂၀၁၅ အမှတ်(၃၀) ၁၀-၅
က) ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ပေါ်မှ တဘက်ခြမ်း ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ထိပ်ရှိ မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးရာ မူလဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်ရာ နေရာသို့တက်ရောက် ဖူးမျှော်ကြခြင်း
ခ) ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ထိပ်ရှိ မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးရာ ဂန္ဓကုဋီတိုက်နေရာတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်
ဂ) ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ခြေရှိ ဒေဝဒတ် ကျောက်မောင်းလှိမ့်ချသော နေရာ
ဃ) ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှ တည်းခိုရာ နာလန္ဒာတရုတ်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ နေ့လည်စာ ပြန်ခြင်း
ဒဿမနေ့ ၁-၁၂-၂၀၁၅ အမှတ်(၃၁) ၁၀-၆
နာလန္ဒာကျောင်းတိုက်ဟောင်းအတွင်းရှိ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ဖွားတော်မူရာ၊ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာ အထိမ်းအမှတ်စေတီသို့ သွားရောက် ဖူးမျှော်ခြင်း
ရှင်သာရိပုတ္တရာစေတီ၌ ဟောကြားတော်မူသော ရှင်သာရိပုတ္တရာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ခန်း တရားတော်
နာလန္ဒာကျောင်းတိုက်ဟောင်းအတွင်း လှည့်လည် လေ့လာခြင်း
ဃ) ဗိမိသာရမင်း၊ အဇာတသတ်မင်းတို့ ဘဏ္ဍာတိုက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သော ကျောက်ဂူ သို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း
င) ဘုရင်အဇာတသတ်မှ မြတ်စွာဘုရား၏ ဓါတ်တော်များကို လိုက်လံစုဆောင်း၍ ထိန်းသိမ်းထားရှ်ိသော ဓါတ်တော်တိုက် နေရာသို့ သွားရောက် ဖူးမျှော်ကြခြင်း
ဆးဆရာဇီဝကလှူဒါန်းထားသောသရက်ဥယျာဉ်နေရာရှိ ဇီဝကမ္ဗက ကျောင်းတော်ရာနေရာသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း
ဇ) ရှေးအခါကုန်သည်များသွားလာထားသော ကျောက်လှည်းဘီးရာများနေရာသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း
ရာဇဂြိုလ်မှ ဗုဒ္ဓဂယာသို့ ခရီးဆက်ခြင်း
၁၁ရက်မြောက်နေ့ ၂-၁၂-၂၀၁၅ အမှတ်(၃၂) ၁၁-၁
ဗုဒ္ဓဂါယာ - မဟာဗောဓိ ဘုရားကြီး၌ ၂-၁၂-၂၀၁၅ နံနက်ခင်း တွင် ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်များ၏ နာယကချုပ်ဆရာတော်ချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ ဆရာတော်ကြီးမှ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို နေကဇာတင်ပွဲနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ မဟာဗောဓိ စေတီကို ကြည်ညို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် စေတီရင်ပြင်၊ အလယ်ပစ္စယံနှင့် အထက်ပစ္စယံများကို လှည့်လည်၍ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးထားပါသည်။
စကာင်္ပူနိုင်ငံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် သီလရှင်ကျောင်းများ လိပ်စာ
=> dhammadownload အတွက်လှုဒါန်းသော အလှုရှင်များ စာရင်း
ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်အတွက် လှုဒါန်းသော အလှုရှင်များ စာရင်း
မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ရှိ် ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ၊ ဓမ္မသမ္ပတ္တိကျောင်းဆောင် Sound System အလှူဒါန
ဓမ္မဂင်္ဂါပါဠိကောလိပ်အတွက် လှုဒါန်းသော အလှုရှင်များ စာရင်း
=> မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်မည့် စင်္ကာပူ ဓမ္မရောင်ခြည် ဗုဒ္ဓသာသနာပြု ကျောင်းတော်ကြီး
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် - ဘဝမြှင့်တင်ရေး ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း => ဓမ္မရောင်ခြည်၏ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများနှင့် ဓမ္မဒါနလုပ်ငန်းများအတွက် ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုမှ ဝိုင်းဝန်း အလှုကောက်ခံပေးပါသည်။ => မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်တွင် ပထမဦးဆုံးတည်ဆောက်မည့် ဇွဲကပင်တောင် ဆံတော်ရှင် Cable Car စီမံကိန်း
ပြည်ပမှ အဘိဓမ္မာ အဘိဓမ္မာ စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုသူများ အတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့တွင် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ ကျင်းပခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ အသေးစိပ်ကို ဤဖေါ်ပြပါ link တွင် ဖတ်ရှုပါရန်။
*******************************************************Daily Downloaded MP3/Video/eBook files in Bytes
Daily Downloaded GB Daily Visits
647 GB 5130
519 GB 4883
551 GB 4841
514 GB 4601
498 GB 4365
503 GB 4517
477 GB 4710
461 GB 4583
536 GB 4608
551 GB 4752
515 GB 4523
545 GB 4577
541 GB 4592
526 GB 4821
566 GB 4778
711 GB 4866
609 GB 4760
568 GB 4745
490 GB 4626
551 GB 4904
561 GB 5104